Vaovao momba ny covid-19 Azo arahina amin’ny “WhatsApp”
Hoentina hanamorana ny fanarahan’ny vahoaka ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ny covid 19, dia namorona tambajotra WathsApp ny CCO Covid-19,
araka ny fanazavana nataon’ny mpandrindra ankampobeny, Jeneraly Elac Andriankaja. Ny laharana 032 19 019 19 hampidirina amin’ny finday ary miditra amin’ny “application” WathsApp, ary afaka mandefa ny soratra hoe: fahasalamanao? Afaka jerena ao amin’io tranonkala io ny antontan’isa havoaka isan’andro izay misy ny mety tsy afa-manaraka. Ao ny fepetra sy ny fandaminana rehetra hampirondra ny fandaminana. Mifandray mivantana amin’ny tranonkalan’ny CCO io, ka hita ao avokoa ny vaovao mahakasika ny covid-19 eto Madagasikara, na misy vitsivitsy aza ny ny avy any ivelany. Misy ny tranonkala. Tsy nataotao foana ny fepetra sy ny lalàna, toy ny sazy, izay misy andininy mifandraika amin’izany hita ao, raha ny fanazavana. Ny antsipirihan’ny fanomezana ihany koa dia fantatra ao satria betsaka sy sesilany ny tonga manome fanomezana: fitaovana, vola,… izay aseho amin’ny fomba mangarahara, hoy io tompon’andraikitra io.